🥇 ▷ Galaxy Note 9 wuu ku jeesan karaa dhammaan taleefannada casriga ah ee is-moodellada leh, mahadsanid ... Fortnite! ✅
Galaxy Note 9 wuu ku jeesan karaa dhammaan taleefannada casriga ah ee is-moodellada leh, mahadsanid … Fortnite!
Nooca aadka loo saadaaliyay ee Android ee ciyaarta ugu guulaha badan sanadkii la soo dhaafay waxay noqon kartaa kumeel gaar oo ku meel gaar ah oo ah Galaxy Note 9, laakiin ma noqon doonto waxa kaliya ee la yaab leh.
Samsung wuxuu si xoogan diiradda saari doonaa Galaxy Note 9, taleefankiisa casriga ah ee casriga ah – kaas oo la soo bandhigi doono 9ka Agoosto waxaana la rajeynayaa inuu si rasmi ah uga soo baxo suuqa Agoosto 24-keeda – oo loogu yeeray inuu jabiyo ukunta gudaha dambiilka Apple, iPhone 2018 jadwalka Sebtember. Kaliya ma ahan qalabka qalabka iyo barnaamijyada software ee higsanaya inay ku dhalleeceeyaan kuwa isticmaala, shirkadda weyn ee Kuuriya ayaa qorsheyneysa inay hoos u dhacdo aamin aamin awood u leh inaad nadiifiso kaararka miiska.
Sida ay soo wariyeen asxaabta ka socota 9to5 GoogleSamsung waxay geli lahayd heshiis aan ka yarayn la macaamilka Ciyaaraha Epic si loo dammaanad qaado milkiilayaasha mustaqbalka ee Galaxy Note 9 a30-maalmood oo gaar ah oo ka mid ah kuwa Android ee aadka loo filayo Fortnite. Ciyaarta aadka loo amaanay, oo nadiifisay caadooyinka dagaalka royale, Waxay noqon laheyd a dhiirigelin ma ahan wax yar oo lagu qanciyo taageerayaasha ugu adag, marka loo eego kooxda haatan weyn ee ciyaaraha casriga ah.
AKHRI AKSO: Nokia 8 Sirocco, dib u eegista
Laakiin taasi maahan, maxaa yeelay kuwa iyagu Hore u dalban Galaxy Note 9 waxaa lagu sii abaal marin karaa marka la keeno V-Buck (Lacagta Fortnite) qiime ahaan inta u dhaxaysa $ 100 iyo $ 150. Ikhtiyaar u yahay isticmaaleyaasha aan daneyneyn ciyaarta, Samsung ayaa soo bandhigi laheyd Qalabka dhagaha AKG qiyaastii waa isku qiimo. Haddii waxaas oo dhan la xaqiijiyo, runtii lama dhihi karo Samsung ma sameyneyso dadaallo ay ku hormarineyso hankeeda cusub.
Xigasho: 9to5 Google